4 Gudaha. Xarumaha 2-Qabashada Qasabada Musqusha
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Centerset Furaha qasabadu Musqusha / WOWOW Qolka Musqusha ee Qolka Musqulaha ee leh Go'aanka Bullaacadda
GOOBAHA LABA -GEBAY WAA QAADAY QAABKA QAABKA: 4 inji tuubada musqusha leh laba naqshad gacmeed, taas oo sahlaysa in la hagaajiyo biyaha iyo heerkulka! Qaan-gaaska sare wuxuu ku siinayaa nadiifin ku filan hoosta tuubada.
HELIS FUDUD: Rakibaadda fudud: Qasabadda aan waxba tarayn waxay la timaadaa ururinta qashin -qaadista usha wiishka & laba gacmo -gashi. 4-inch centeret iyo 3 design buurta godka ayaa u oggolaanaya rakibidda fudud.
TAYADA SARE EE QIIMAHA: Lugta naxaasta ah oo hubinaysa cimri dherer iyo ku -tiirsanaan; Ka samaysan walxaha darajada cuntada BASF, ka ilaali caafimaadkaaga iyo qoyskaaga. Qasacadda qasabadda aan waxba tarayn ee laga sameeyay aerator ABS ayaa kaa caawin karta inaad ilaaliso biyaha. (Aerator -kaan si toos ah ayaa gacmahaaga hoos loogu dhigi karaa si loo nadiifiyo)
DHAMMAADKA KORMISKA BASHASHAY: Qasabadda aan waxba tarayn ee dhammays-tiirka chrome-ka muraayadda, naqshadaynta saqafka sare ee u gaarka ah si loo abuuro qaab-dhismeed aan duugoobayn. Aan daxalayn, daxalayn, xoqin ka hortag.
2321400C tilmaamaha rakibaadda
SKU: 2321400C Categories: Qubeyska Musqusha, Centerset Furaha qasabadu Musqusha Tags: daadinta kulanka, barafoobay dhalaalaya, kaalinta iska caabin
Buugga 'Centerset Deck Mount'
5 Sano OO DAMMAAN XADDIDAN